Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka » ISri Lanka iyaqhubeka nokutshixa ngokutsha njengoko ukufa kwe-COVID kusanda
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amazwe esiqithi aye abhenela kumanyathelo angqingqwa kumzamo wokuthintela ukusasazeka kwe-coronavirus, njengoko ukwanda kwezifo kunye nokufa kugqugqisa kwizibhedlele zaseSri Lanka, izidumbu kunye neendawo zokutshisa izidumbu.
ISri Lanka ibhengeza ukuvalwa kweentsuku ezili-10.
Amatyala amatsha e-COVID-19 eSri Lanka kunye nokufa kuyanda.
Ubhubhane ojikelezayo ugubungela izibhedlele kunye neendawo zokugcina izidumbu eSri Lanka.
I-Sri Lanka yanyanzelwa ukuba ithobele uxinzelelo olunzulu oluvela kwiingcali zonyango emva kokuba ibhale inani eliphezulu kakhulu le-COVID-19 yokufa kwabantu kwe-187 kunye ne-3,793 yamatyala amatsha ngoLwesithathu kwaye ibhengeze ukuvalwa kweentsuku ezili-10 eziqala ngokuhlwanje.
ISri Lanka ibike inani elipheleleyo lezifo ezingama-372,079 ukusukela oko kwaqhambuka kunyaka ophelileyo, kwasweleka abantu abangama-6,604. Iingcali zezeMpilo zithi eyona toll ibiphantsi kabini ubuncinci.
“Ukutshixwa kwelizwe lonke ukususela nge-10 ngokuhlwa namhlanje (nge-20 ka-Agasti) ukuya ngoMvulo (Agasti 30). Zonke iinkonzo ezibalulekileyo ziya kusebenza njengesiqhelo, ” UMphathiswa wezeMpilo UKeheliya Rambukwella utshilo kuTwitter.
Umphathiswa wezempilo osemncinci, u-Channa Jayasumana, wayebize i-Delta eyahlukileyo yintsholongwane "ibhombu enamandla eqhume eColombo kwaye isasazeka kwenye indawo".
Iingcali kwezonyango, iinkokheli zonqulo, abezopolitiko kunye noosomashishini bacele ukuba kuyekwe kwangoko kuzwelonke ukunqanda ukusasazeka kwezifo.
Isilumkiso sokuba izibhedlele kunye neendawo zokugcina izidumbu zifikelela kwinqanaba eliphezulu, oogqirha kunye neemanyano zabasebenzi babongoza urhulumente ukuba anyanzelise.
Urhulumente wase-Sri Lankan wayelibazisa isenzo, ecacisa uqoqosho olugulayo.
Usulelo lwemihla ngemihla eSri Lanka luye lwaphindaphinda kabini ngenyanga ukuya kwi-3,897 XNUMX.
Izibhedlele kwilizwe elinabantu abazizigidi ezingama-21 ziphuphuma zizigulana ze-COVID-19 njengezona zinokuhanjiswa kakhulu zeDelta ngabantu.
Izithintelo ezininzi sele zikhona, nezikolo, iijingi kunye namachibi okudada avaliwe kwaye imitshato kunye nemiboniso yomculo ivaliwe. Abasemagunyeni banyanzelisa ixesha lokubuya ebusuku ngoMvulo, bathintela intshukumo ukusuka kwi-10 ngokuhlwa kude kube yi-4 kusasa yonke imihla.
Utshintsho lwesithathu eSri Lanka losulelo luye lwabekwa ityala kwimibhiyozo yoNyaka omtsha weSinhala kunye neTamil phakathi ku-Epreli.
Ukulandela Ukuvalela inyanga yonke, urhulumente uphinde walivula ilizwe ngoJuni exhomekeke kugonyamelo olunamandla njengecebo lakhe lokujongana nokusasazeka.
Malunga nekota yabemi baseSri Lanka bagonyiwe ngokupheleleyo, uninzi lwabo lutofelwe iSinopharm yaseChina.
ISri Lanka ikwamkele iPfizer, iModerna, iAstraZeneca kunye neRussia iSputnik V.
Ngaphandle kwezigidi ezintlanu zabemi abazizigidi ezingama-21 abafumana iidosi ezimbini zokugonya, intsholongwane yosulele abantu abangaphezulu kwamandla esibhedlele nakwicandelo labucala.